Baaritaan lagu sameynayo biyaha ceel laga shakiyey in dad badan ku sumoobeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baaritaan lagu sameynayo biyaha ceel laga shakiyey in dad badan ku sumoobeen
A warsame 11 December 2014
Mareeg.com: Gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Xasan Muungaab ayaa sheegay in la baarayo biyaha ceel laga shakiyey iney ku sumoobeen ilaa 100 qof, kuwaasoo deganaa xaafadda Juungal ee degmada Yaakhshiid ee magaalada Muqdisho.
Muungaab ayaa sheegay inaan weli la xaqiijin karin sababta dadkaan faraha badan maanta ula soo dhaceen xanuun isku mid ah oo ah shuban iyo matag.
Inta la ogyahay xanuunkaan safmarka ah ayaa dilay ilaa 9 ruux, ku dhawaad 100 kalana waxaa la dhigay Isbitaallada Carafaat, SOS, Keesaney iyo kuwa kale.
Muungaab oo u warramay VOA ayaa sheegay in la xiray ceelka laga shakiyey, lagana soo qaaday biyo si hay’adaha ku shaqada leh baaritaan ugu sameeyaan.
“Ceelka laga shakiyey waan xirnay, waxaana laga qaaday biyo si loo soo baaro, maxaa yeelay waxaa jira shaki ah in xanuunku biyaha ka yimid, laakiin lama hubo” ayuu yiri Muungaab.
Wuxuu sheegay Muungaab in xaaladda dadkii xanuunkaas xalay iyo maanta soo riday ay soo hagaageyso, dhimashudan yartahay.
Qeyb ka mid ah xaafadda Juungaal ee magaalada Muqdisho ayaa xalay iyo maanta lagy arkay xanuun safmar ah, kaasoo lag shakiyey inuu ka dhashay biyo dadku cabeen.
Dhismaha wadada dhanka xeebta woqooyi uga baxda Muqdisho oo laga shiray